2:20 pm, सोमबार, पुस ७, २०७६
पछिल्लो समय रिकन्डिसन कारको बजार विस्तार हुँदै गइरहेको छ भने एउटा सेग्मेन्टबाट अपग्रेड भएर माथिल्लो सेग्मेन्टमा जाने प्रचलन बढ्दो भएकाले बजारमा पुराना गाडीको बिक्री बढ्दै गएको छ ।
यस्तोमा विभिन्न गाडी बिक्रेता कम्पनीले आफ्नै रिकन्डिसन हाउस खोल्ने परिपाटी बढि रहेको समयमा केही समयअघि स्थापना भएर काम गर्दै आएको सिप्रदी अस्योर्डले कसरी गाडी किनबेच गरिरहेको छ । कहाँ–कहाँबाट आफ्नो सेवा दिइरहेको छ भन्ने विषयमा सिप्रदी अस्योर्डका डेपुटी जनरल मेनेजर ध्रुव रेग्मीसँग मेरोअटोले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः
अहिले रिकन्डिसनको बजार कत्रो भएको छ ? सिप्रदी अस्योर्डले बजारमा कति संख्यामा गाडी किनबेच गर्छ ?
अहिले रिकन्डिसन कारको बजार करिब १६ हजार हाराहारीमा रहेको हामीले अनुमान गरेका छौं । नयाँ कारको हाराहारीमा नै नेपालमा रिकन्डिसन गाडीको बजार रहेको छ भन्ने हाम्रो अनुमान हो । तर, सम्पन्न मुलुकमा रिकन्डिसको बजार नयाँको तुलनामा दोब्बर हुन्छ । नेपालमा गाडीको जीवन लामो मानिन्छ त्यसैले कुनै व्यक्तिले किनेको एउटा कार बर्षौसम्म चढ्ने गरेको पाइन्छ ।
जहाँसम्म सिप्रदी अस्योर्ड किन आयो र यसले बजार हिस्सा कति ओगटेको छ भन्ने विषयमा कुरा गर्दा हामी रिकन्डिसनको बजार बिस्तार गर्नभन्दा टाटाका नयाँ गाडी किन्ने ग्राहकलाई एक्स्चेन्ज र रिकन्डिसन सेवा दिन आएका हौं । हामी सिप्रदी एस्योर्डमा बाहिरबाट खोजेर गाडी किन बेच गर्दैनौं । जुन ग्राहकले पुरानोसँग साटेर नयाँ कार किन्न चाहनु हुन्छ उहाँहरुलाई एक्स्चेन्ज सुविधा दिने हाम्रो उद्देश्य हो ।
एक्स्चेन्ज सुविधा भने हामीले नेपालभर फैलिएर रहेका टाटा प्यासेन्जर कार आउटलेटबाट दिइरहेका छौं । यदि कुनै ग्राहकले पुरानो गाडी दिएर नयाँ गाडी लिदैन भने हामी उसको पुरानो गाडी लिदैनौं । त्यसैले अहिले मासिक करिब ३५ देखि ४० यूनिट गाडी हामीले किनबेच गर्दै आएका छौं ।
सिप्रदी अस्योर्डले बिक्री गर्ने रिकन्डिसन कारहरु कति मूल्यदेखि पाउन सकिन्छ ? साथै, कस्तो किसिमको वारेन्टी वा ग्यारेन्टी प्रदान गर्दै आउनु भएको छ ?
सिप्रदीको नाम जोडिएसँगै रिलायवल प्रडक्ट पाउन सकिन्छ भन्ने संदेश ग्राहकहरुमा जाँदै गरेको अवस्था छ, भने हामीले पुराना गाडीलाई पनि आफ्नै हिसावले मूल्याङ्कन गरेर सिप्रदी हायर पर्चेजबाट आवस्यक परेको खण्डमा कर्जा प्रवाह गर्ने गरेका छौं ।
सुरुमा हामीले जतिसुकै पुरानो गाडीपनि किन्ने गरेका थियौं । अहिले बाहिरका केही पार्टीसँग सम्झौंता गरेर निश्चित अवधिभन्दा पुरानो गाडी हामी उनिहरुलाई दिन्छौं । हामी १० वर्षभन्दा पुराना गाडी बिक्री गर्दैनौं । कुनै एक वा दुई वर्ष पुराना गाडीमा हामी वारेन्टी प्रदान गरिन्छ ।
हामी १० लाखदेखि ३० लाखसम्मका गाडीहरु केही विशेष सुविधासहित उपलब्ध गराउँदै आएका छौं । टाटाको संजिवनी स्कीम लिएर ग्राहकले सुविधा लिन सक्नुहुन्छ ।
तपाईहरुले एक्स्चेन्ज गर्ने गाडीहरु प्रायः कुन ब्राण्डको हुन्छ ?
हामीले बिक्री गर्ने टाटाका पुराना गाडी नै हाम्रो सबैभन्दा धेरै आउने गाडी हुन् । विशेषत हामी टाटाका नयाँ गाडी बिक्री गर्ने हुनाले हाम्रा पुराना मोडलसँग एक्स्चेन्ज गर्न आउने ग्राहक धेरै हुनुहुन्छ । त्यसैले स्वभाविक रुपमा ५० प्रतिशत टाटाका गाडी हुन्छ भने पछिल्ला दिनमा टाटाका नयाँ गाडी किन्ने ग्राहकहरु बढ्दै गएकाले करिब ५० प्रतिशत अन्य ब्राण्डका गाडीहरु आउने गरेका छन् ।
उपत्यका बाहिरका गाडी हामीले जहाँ एक्स्चेन्ज गर्छौ त्यही लोकल ग्राहक खोजेर बिक्री गर्दै आएका छौं ।